8:04 AM ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) No comments
iPhone/Pad တွေကို Jailbreak လုပ်စရာမလိုဘဲ Cracked app တွေသွင်းနိင်မယ့် Tongbu
Posted: 22 Jul 2013 08:01 AM PDT
“ကျွန်တော်တို့ တိုင်းအတွက် GSM အလုံး တစ်သောင်းပဲ ရတယ်လို့ ပြော တယ်။ ဂဏန်းတွေက ၀၉ ၂၅ ကနေ ၀၉ ၂၉ အထိ ရှိတယ်လို့ ကြားတယ်” ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကျပ် ၁၅၀၀ တန် WCDMA ဆင်းကတ်များကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ချင်းပြည်နယ်အတွက် ချထားပေးသည်ဆိုသော်လည်း အဆိုပါ နံပါတ်များ ဖုန်းဈေးကွက်အတွင်း ရောက်ရှိခြင်း မရှိကြောင်း၊ GSM ဆင်းကတ်များ စတင် ချထားပေးသည့်အတွက် ဟန်းဆက် ဈေးကွက်အပေါ် ကြီးကြီးမားမား မသက်ရောက်နိုင်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်မှ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင် တာဝန်ခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
Posted: 22 Jul 2013 12:48 AM PDT
Posted: 21 Jul 2013 11:00 PM PDT
Posted: 21 Jul 2013 08:39 PM PDT
Digital Life ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၁၁ အား Download ရယူနိုင်ပါပြီ
အပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကျဖြစ်သော Digital Life နည်းပညာဂျာနယ်၏ အတွဲ ၂ အမှတ် ၁၁အား အောက်ပါ link များမှ download ဆွဲယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်ရဲ့ တစ်မိနစ် အတွင်း အင်တာနက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်...
၁) အင်တာနက်စသုံးတဲ့သူ ၇၁၇ ယောက်တိုးလာပြီ
၂) ဒိုမိန်းအသစ် ၇၀ ခု register လုပ်ပြီးသွားပြီ
၃) Wikipedia ဆောင်းပါးအသစ် ၅ ခု ဖန်တီးပြီးသွားပြီ
၄) blog အသစ် အခု ၅၀ ဖန်တီးပြီးသွားပြီ
၅) blog ပို့စ် အသစ် ၁၅၀၀ တက်သွားပြီ
၆) အီးမေးလ်အကောင့်အသစ် ၄၃၅ ခု ဖောက်ပြီးသွားပြီ
၇) Spam email ပေါင်း ၈၆၀၀၀၀၀၀ ခု လက်ခံရရှိသွားကြပြီ
၈) အီးမေးလ်ပေါင်း ၁၆၈၀၀၀၀၀၀ ခု ပို့ပြီးသွားပြီ
၉) ၄၁၆ ခုသော website တွေကို hack ဖို့ လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ
၁၀) website ၁၂ ခု hack ခံလိုက်ရပြီ
၁၁) အချက်အလက်သူခိုးတွေဟာ သားကောင်အသစ် ၂၀ ရှာပြီးသွားပြီ
၁၂) နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုပေါင်း ၁၅၇၀၃၆ မှု ဖြစ်သွားပြီ
၁၃) ၁၇၁၃၆၆ GB ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို share ပြီးသွားပြီ
၁၄) အချက်အလက်ပေါင်း ၆၃၉၈၀၀ GB ကို ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း လွှဲပြောင်းပြီးသွားပြီ
၁၅) Skype ခေါ်ဆိုမှုပေါင်း ၃၇၀၀၀၀ လုပ်ပြီးသွားပြီ
၁၆) Google ကနေ serach လုပ်မှုအရေအတွက် ၆၉၄၄၄၅ လုပ်ပြီးသွားပြီ
၁၇) Spotify မှာ သီချင်းအသစ် ၁၄ ပုဒ်တက်လာပြီ
၁၈) Youtube ဗွီဒီယို ၁၃၀၀၀၀၀ ခု ဖွင့်ပြီးသွားပြီ
၁၉) Youtube video ပေါင်း ၆၀၀ တင်ပြီးသွားပြီ
၂၀) Flickr မှာ ပုံပေါင်း ၆၆၀၀ တင်ပြီးသွားပြီ
၂၁) Flickr ပုံပေါင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ပုံ ကြည့်ပြီးသွားပြီ
၂၂) Instagram မှာ ပုံပေါင်း ၃၆၀၀ share ပြီးသွားပြီ
၂၃) LinkedIn အကောင့်သစ် ၁၀၀ ဖွင့်ပြီးသွားပြီ
၂၄) Twitter အကောင့်သစ် ၃၂၀ ဖွင့်ပြီးသွားပြီ
၂၅) Twitter လက်ရှိအသုံးပြုနေသူ ၂၇၇၇၇ ဦး ရှိနေတယ်
၂၆) Tweets အသစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ခု တက်သွားပြီ
၂၇) Tumblr မှာ ပုံပေါင်း ၂၀၀၀၀ တိုးလာပြီ
၂၈) Pinterest လက်ရှိအသုံးပြုနေသူ ၁၁၈၀၅ ဦး ရှိနေတယ်
၂၉) Facebook အသုံးပြုသူ ၄၁၁ ယောက်ထပ်တိုးလာပြီ
၃၀) Facebook wall post အသစ် ၇၉၃၆၄ ခု တက်သွားပြီ
၃၁) Facebook မှာ ပုံအသစ် ၁၇၃၆၁၁ ပုံတင်ပြီးသွားပြီ
၃၂) Facebook မှာ comment အသစ် ၅၁၀၀၄၀ တက်သွားပြီ
သင်ဒီပို့စ်ကိုဖတ်နေတဲ့ စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းမှာပဲ အပေါ်ကအချက်တွေအကုန်လုံး တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်...။
Ref : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=445953575502479&set=a.351047714993066
Posted: 21 Jul 2013 12:10 PM PDT
Jailbreak မရှိတော့တဲ့ iOS သမားတွေအတွက် Paid apps တွေကို တိုက်ရိုက်အင်စတော လုပ်လို. ရတဲ့ နောက်ထပ် နည်းလမ်းကောင်းတခုပါ။
Jailbreak မလုပ်ဘဲ cracked app တွေသွင်းလို့ရတဲ့ အခြားဆော့ဝဲတွေဖြစ်တဲ့ PP, kuaiyong softwares က ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ ခက်တာက ဒေါင်းထားတဲ့ apps တွေ sign out ဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလို. ခဏဏ sync ပြန်လုပ်နေရတာပါ။ အဲဒါနဲ ရှာရင်း ရှာရင်း Tui ဆိုတာလေး သွားတွေ.ပါတယ်။ Jailbreak မလုပ်ထားပဲ paid apps တွေ free install ရပါတယ်။ ကျသွားတာမျိုးလဲ မရှိပါဘူး။ လိုချင်တဲ့ apps တွေကို request လုပ်လို. ရပါတယ်။ Windows အတွက်ရော iOS version အတွက်ရော ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းပြီး idevices ပေါ်မှာ အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။ PP , kuaiyoung ထက်သာတာ တခုက English version ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးသားတွေ sync ပြန်ပြန်မလုပ်ရတာနဲတင် တော်တော် ဟုတ်နေပါပီ။ iPhone/Pad တွေကို Jailbreak လုပ်စရာမလိုဘဲ Cracked app တွေသွင်းနိင်မယ့် Tongbu v2.0.7.2 ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
Source : http://www.myanmarmobileapp.com
Posted: 21 Jul 2013 11:46 AM PDT
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ Prepaid GSM/ WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့်
ကတ်ဖြင့် သုံးစွဲသူများမှ အင်တာနက်စနစ်အား ဌာနသို့လူကိုယ်တိုင်
လာရောက်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် (၁.၈.၂၀၁၃)မှစပြီး
အင်တာနက်ဖွင့်ရန်အတွက် မိမိမိုဘိုင်းဖုန်းမှ 1331 နံပါတ်သို့ "Orderdat service " စာသားအား SMS ပေးပို့ရပါမည်။ အင်တာနက်လိုင်းပွင့်ပါက သုံးစွဲသူ၏ငွေလက်ကျန်ထဲမှ ၁၀၀၀၀ကျပ် (တစ်သောင်းကျပ်တိတိ) ကို နှုတ်ယူပါမည်။
Credit: Yatanarpon News